Umkhiqizi Webhokisi Lesipho Sensimbi, I-Wholesale for Promotional
Imikhiqizo Yebhokisi Lesipho Sokuphakamisa Metal Tin
Amabhokisi esipho se-tin ajwayelekile kwezinye izitolo ezinkulu noma ezitolo ezinkulu, kodwa uyazi ukuthi kungani izipho zigcwele emabhokisini esipho aphezulu?
Isizathu isifiso sokukhulisa ukuthengisa. Akunzima ukuthola ukuthi ngenkathi ugxila ekubukekeni, ibhokisi lesipho sezipho kufanele linake futhi isikrini sokuqukethwe kwiphakheji. Izici zomkhiqizo kumele zigqanyiswe kusuka kwephakeji ukuze abathengi bazi ukuthi yini esebhokisini le-tin izipho ngokubheka nje.
Kungani Ibhokisi le-Tinipho libalulekile kuma-Promotions
Amabhokisi wesipho Zijwayelekile kwezinye izitolo ezinkulu noma ezitolo ezinkulu, kodwa uyazi ukuthi kungani izipho zigcwele emabhokisini ezipho ezinkulu?
Iziphi izici okufanele zidluliselwe kubathengi ngezindaba zomkhiqizo? Ngale ndlela, ungafinyelela ukuthengisa okuhle futhi wenze abathengi bazimisele ukukhokha! Ngakho-ke yini okufanele sinake ngayo ekwakhekeni kwamabhokisi e-tin izipho? Abahleli abalandelayo bazokubheka kakhulu:
I. Izinto zesipho sebhokisi lesipho
Uma kukhulunywa ngezinto zokwakha, singase sikukhulume kaningi ngaphambili. Izinto zebhokisi le-tin lesipho i-tinplate, ne-tinplate, eyaziwa nangokuthi i-tinplated iron, yigama elivamile lamapuleti wensimbi abunjiweyo. Amathiya esipho sensimbi asetshenziselwa ikakhulukazi ukuvikela ukugqwala nokugqwala.
Kuhlanganisa amandla nokwakheka kwensimbi ngokumelana nokugqwala, ukubukeka, nokubukeka okuhle kwensimbi entweni eyodwa. Inezimpawu zokumelana nokugqwala, ukungadli ubuthi, amandla aphezulu, nokuguquguquka okuhle kakhulu. Ngakho-ke bhala lapha, kukhona isiqinisekiso kulokho kwebhokisi lensimbi lesipho. Ngaphandle kwalokho, ikhasimende lizizwa limbi lapho lithintwa, ngingalithenga kanjani?
2, Okuqukethwe kwebhokisi lesipho sezipho
Uma sikhuluma ngokuqukethwe oketshezi lwezipho zensimbi, akukho lutho olungaphezu kokuqanjwa kwephakethe lebhokisi le-tin. Ngokuvamile, sinamabhokisi ezinsimbi ezengeziwe ezengeziwe, njengamabhokisi ekhekhe enyanga, amabhokisi e-iron iron, amabhokisi wesipho semikhiqizo yezempilo, njll., Le mikhiqizo idinga ukuveza imininingwane ebalulekile ngomkhiqizo noma inkampani ngayinye futhi ihambisane nemibala efanelekile.
Kungale ndlela kuphela lapho bangaheha ukunakwa kwamakhasimende, ukuze amakhasimende akwazi ukuthatha okufana nokupakishwa kwamathini futhi abhekisise ukufeza isifiso sokuthenga. Kepha lapha umhleli wewebhu uCheng Cheng ukhumbuza wonke umuntu ukuthi wonke umuntu kumele aqhakambise izici zakhe zomkhiqizo kanye namaphuzu okuthengisa ekupakisheni umbhalo. Ngaphandle kwalokho, noma ngabe kuhle kangakanani ukupakisha, ngeke kufinyelele kumakhasimende.
I-3, iphethini lebhokisi lesipho
Sikhuluma ngenhla, lapha sigcizelela iphuzu, iphethini yokufakwa kwamabhokisi e-tin tin box. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, sonke siyazi ukuthi ubuthi bemibhalo abukhali njengephethini. Isibonelo, sivame ukucabanga ngomkhangiso wakudala weplatinamu ophumayo.
Le nguqulo ayibalulekile, ngakho-ke sikhumbula uzungu lwabogogo kanye nabayeni abadansa ngaphakathi. Nanku umphumela wokugqamisa iphethini.